Isitudiyo sikaCharlie - ikhaya elithokomele enkabeni yeSofia - I-Airbnb
Isitudiyo sikaCharlie - ikhaya elithokomele enkabeni yeSofia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sasha
U-Sasha Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elikhanyayo, elithokomele, elimaphakathi nesitudiyo sonke. Indawo emangalisayo, eduze kwe-metro, ibhasi nezixhumanisi zethilamu; isixhumanisi esiqondile esikhumulweni sezindiza i-Sofia. Itholakala endaweni enhle yokuthenga, ukubuka indawo, ukudla namabha.
Isakhiwo somndeni esithulile kude nomsindo womgwaqo, indawo yokungena evikelekile enekhodi, asikho isidingo sokushintshisana ngokhiye! Kuhlotshiswe kabusha, kuhlanzeke ngendlela engenasici futhi kusha sha. Ukubheka egcekeni langaphakathi kanye nemizuzu kude nesitolo esikhulu. Ikhaya elithokomele ngempela kude nasekhaya!
Itholakala maphakathi nedolobha, iflethi lesitudiyo lihlinzeka ngamathuba amahle kakhulu okubona okuhamba phambili kwe-Sofia - uhambo olude olude nezimpawu zomhlaba ezifana nePhalamende, Igalari Kazwelonke, imnyuziyamu yomlando wemvelo, Ithiyetha Kazwelonke, i-Alexander Nevsky Cathedral emangalisayo nezinye eziningi. amapaki emvelo. Eduze kakhulu nesikwele esikhulu se-Vitosha kanye nomgwaqo wokuthenga kanye nezindawo ezihlukene zomlando nezakudala.
Lesi situdiyo siphakathi kwezindawo eziningi ezinhle zokudla, ukuphuza nokuphuma- okuhlanganisa nezindawo zokudlela eziningi ezidumile nezitolo zokudla zasemgwaqweni, amabha kanye nokuphila kwasebusuku.
Ingaphakathi lesitudiyo lisanda kulungiswa, okuhlanganisa negumbi lokugezela elisha sha kanye nekhishi, imibhede emibili kanye netafula lokudlela. Uzothola konke okudingayo ukuze uhlale kahle ukuze uhlole i-Sofia efana nale:
- I-Wi-Fi enesivinini esiphezulu,
- umshini ongenisa umoya,
- efrijini nge-icebox,
- i-induction hob,
- umshini wekhofi,
- zonke izitsha ezidingekayo kanye nezitsha,
- umshini wokomisa izinwele,
- amathawula nezingubo zokulala.
I-studio ilungele kokubili uhambo lwamaholide nolwebhizinisi!
4.93 · 327 okushiwo abanye
Indawo ehlala kuyo ine-Sofia engcono kakhulu okufanele inikeze ngokudla okumnandi, izitolo zekhofi ezinkulu ngaphesheya komgwaqo, izinketho eziningi zokuluma okusheshayo noma isidlo sakusihlwa esihle kanye namanye amabha athandwa kakhulu edolobheni.
Kukhona ikhemisi, igrosa eluhlaza, izitolo ezinkulu, izitolo zasendaweni, izinto zokuhlanza izingubo zokugeza kanye nezitolo zezipho ezisendaweni ehamba ngezinyawo.
Sicela usazise uma udinga olunye usizo, ababungazi baseduze futhi bayatholakala ukuze bakusize.
USasha Ungumbungazi ovelele